Momba anay - Shanghai Allsourcing Industrial Co., Ltd.
SHANGHAI ALLSOURCING dia mpamatsy sy mpanondrana matihanina ary mpanafatra vokatra ara-panatanjahan-tena sy kojakoja fialamboly, ary vokatra mandeha ho azy Industrial, manampy ny mpanjifantsika izahay hividy ny kojakoja lamaody sy ny vokatra Indostrialy manerana an'i Shina rehetra eto.
Allsourcing dia afaka manome kojakoja fampiasa amin'ny lamaody, ny fahaizan'i Allsourcing manokana hamolavola sy handika ny fironana lamaody sy ny entana ho an'ny kaonty rehetra eny an-tsena sy ny isa vidiny ahafahantsika mivoatra ho an'ny mpanjifa isan-karazany. Ny orinasa dia manana mpizara orinasa mihoatra ny 500. Ity dia afaka manome antsika fahaizana manome serivisy tsara ho an'ny mpanjifa manerantany.
Adiresy: Huguang East Road 89, Distrikan'i Minhang, Shanghai, Sina
Shanghai Allsourcing dia orinasa matihanina manambatra ny famolavolana, ny fanamboarana ary ny fivarotana satroka sy kojakoja hafa miaraka amin'ny ozininay natsangana tamin'ny 2006 tany Shanghai. Manam-pahaizana manokana amin'ny karazana kapa rehetra izahay, ary koa kojakojam-pitaovana sasantsasany. Afaka manolotra anao vokatra maro hafa koa izahay, mifototra amin'ny volavolanao sy ny asanao manokana. Isaky ny baiko tsirairay dia mifehy tsara ny kalitao avy amin'ny fisafidianana fitaovana, fanontana, fanjairana, fanangonana hatramin'ny fandefasana farany. Filozofia: ny fiaraha-miasa tsara indrindra dia hita taratra amin'ny fifandraisan'ny fifampitokisana sy ny fifanajana amin'ny tombony ifanaovana, mitarika valiny mahomby kokoa. Manangana fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifa; Customer-mirona; Vidiny mifaninana; Fahamarinana sy fahamendrehana; Fanaterana ara-potoana; manome vokatra avo lenta. Raha mitady mpiara-miasa mahay mahay ianao, mifandraisa aminay. Mampanantena fiaraha-miasa feno izahay ao anatin'ny valin'ny 24 ora, vokatra miavaka tsara amin'ny vidin'ny fifaninanana ary ny fandaharam-pamokarana hihaona amin'ny drafi-pivarotana. Raha mila fanazavana fanampiny momba anay, dia miarahaba anao izahay hitsidika ny tranokalanay. Faly izahay mihaino anao, ary faly kokoa manampy ny filanao